ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကိစ္စအတွက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ နျူကလီးယား အထူးသံတမန် အမေရိကန်နိုင်ငံ သွားမည် - Xinhua News Agency
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကိစ္စအတွက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ နျူကလီးယား အထူးသံတမန် အမေရိကန်နိုင်ငံ သွားမည်
ဆိုးလ်၊ ဩဂုတ် ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ နျူကလီးယား အထူးသံတမန်သည် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေးဆွေးနွေးရန် ယခုသီတင်းပတ်ကုန်၌ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာက ဩဂုတ် ၂၇ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးရာ တောင်ကိုရီးယား အထူးကိုယ်စားလှယ် Noh Kyu-duk သည် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ (DPRK) ဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံ အထူးကိုယ်စားလှယ် Sung Kim ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ဩဂုတ် ၂၉ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်အထိ ဝါရှင်တန်သို့ လေးရက်ကြာခရီးသွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ခရီးစဉ်အတွင်း Noh သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အိမ်ဖြူတော် တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ပြီး ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းက ဆိုးလ်သို့ လာရောက်ခဲ့သည့် အမေရိကန် နျူကလီးယားသံတမန်၏ ခရီးစဉ်အတွင်း နှစ်နိုင်ငံကြားရှိခဲ့သော အနီးကပ် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၌ တွေ့ဆုံမှုအတွင်း Noh နှင့် Kim တို့သည် ပြုံယမ်းအား စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ရန် တိုက်တွန်းလျက် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ဖြစ်နိုင်သမျှ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများပေးအပ်ရေးအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် စောလျဉ်းစွာ ပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက် Noh ၏ ဝါရှင်တန်ခရီးစဉ်အတွင်း တောင်ကိုရီးယားနှင့် အမေရိကန်ကြား နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်နိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံကြား နျူကလီးယားကင်းစင်ရေး ဆွေးနွေးမှုများမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့၌ သဘောတူညီမှုမရရှိဘဲ အဆုံးသတ်ခဲ့သည့် မြောက်ကိုရီးယား ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်နှင့် အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ကြား ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပြီးချိန်မှစ၍ ရပ်တန့်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
#US, #S.Korea, #NukeEnvoy, #KoreanPeninsula, #Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #အမေရိကန်, #တောင်ကိုရီးယား, #နျူကလီးယားသံတမန်, #ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်, #ဆင်ဟွာ
SEOUL, Aug. 27 (Xinhua) — South Korea’s nuclear envoy will visit Washington this weekend to discuss issues on the Korean Peninsula, the South Korean foreign ministry said Friday.
During the visit, Noh will meet the officials from the U.S. Department of State and the White House to continue the close consultations, which the two sides had during the U.S. nuclear envoy’s trip to Seoul earlier this week.
During the meeting in Seoul, Noh and Kim discussed the possible humanitarian assistance to the DPRK, calling for Pyongyang to return to the dialogue table.
The South Korea’s foreign ministry said it anticipated that an in-depth discussion can be made between South Korea and the United States during Noh’s Washington trip for the early resumption of the Korean Peninsula peace process.
Denuclearization talks between the DPRK and the United States have been stalled since the second summit between top DPRK leader Kim Jong Un and former U.S. President Donald Trump ended without agreement in February 2019 in the Vietnamese capital of Hanoi. Enditem
Photo : South Korean President Moon Jae-in (R) meets with top leader of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) Kim Jong Un in the border village of Panmunjom on April 27, 2018. Moon Jae-in arrived Friday morning in the border village of Panmunjom for his first summit with Kim Jong Un. (Xinhua/Inter-Korean Summit Press Corps)
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် : စွပ်စွဲပြစ်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် တာဝန်ယူခြင်းမှ လွှဲချရန်
ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၌ လက်နက်ခဲယမ်းသိုလှောင်ရုံ ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း လူ ၄ ဦး သေဆုံး ၊ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရာရရှိ